> Amin Arts
> Ali Halane
> Baydhabo Media
> Baydhabo News
> Borama News
> Calanka TV
> Cayaaraha Dunida
> Dalka Online
> Danan News
> Dahabi Films
> Darwiish Online
> Daawo 24
> Djibouti Nation
> Djib Net
> Garowe Online
> Geeska Afrika
> Gool FM
> Goldogob Times
> Hadhwanaag News
> Hiiraan Online
> Hiiraan Times
> Horseed Media
> Ifiye Radio
> Ilhan Omar
> Isha Baydhabo
> Jaalle Siyaad
> Jilaa News
> Kasmo News
> Keyd Media
> Kilil 5
> Kismaayo news
> Masuul - Heeso
> Minnesota Da^wah
> Mogadishu university
> Osman Arts
> Puntland Times
> Qorahay Online
> Raadraac Media
> Raas Media
> Radio Muqdisho
> Rajo News
> Salaan Media
> Somali American
> Somali News
> Somali Busin.
> Somali Sports
> Somalia Online
> Somali Doctors
> Somaliland Live
> Somalistar TV
> SomaliSwiss TV
> Somali Youth
> Universal TV
> Waajid Press
> Wardheer News
> Dagens Industri
> Dagens Medicin
> Dagens Nyheter
> Helsingborgs Dagblad
> Ny Teknik
> Svenska Dagbladet
> Sydsvenska Dagbladet
> Veckans Affärer
> Dag og Tid
> Klar Tale
> VG - Verdens Gang
> Vårt Land
> The Norway Post eng.
> Berlingske Tidende
> Dagbladet Arbejderen
> Ekstra Bladet
> I Dag
> Kristeligt Dagblad
> Helsingin Sanomat
> Turun Sanomat
> Helsinki Times
> Bæjarins Besta
> Vikurfréttir á Netinu
> WN Iceland News
> Cambridge Evening
> Daily Mail
> Gateshead Post
> Herald & Post Newsp.
> Leichester Mercury
> Liverpool Echo
> London Evening Std.
> Manchester Evening N.
> Sky News
> Southern Daily Echo
> Sunday Mirror
> Sunday People
> Sunday Sun
> The Daily Telegraph
> The Evening Gazette
> The Independent
> The Mirror
> The Observer
> Yorkshire Evening Post
> Dallas Morning News
> Houston Chronicle
> San Antonio (mySA
> Australian Financial
>Sydney Morning Herald
> Inside China Today
> Cairo Times
> Egypt Today
> Manila Bulletin
> Sun.Star Network
> The Economic Times
> The Indian Express
> The Jakarta Post
> Ha’Aretz Daily
> Israel National News
> Japan Times Weekly
> Japan Today
> Kyodo News
> The Newzealander
> Al Jazeera (eng.)
Kulan gaar ah oo maanta magaalada Muqdisho ku dhex maray r/wasaare Khayre iyo wakiillada beesha caalamka Sawirro
23/08/2017 17:53:00:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada JFS Mudane Xasan Cai Khayre ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay Wakiillada Beesha Caalamka, kulanka oo ujeedadiisu ahaa inuu warbixin ka siiyo xaaladda dalka, isla markaana la sii xoojiyo iskaashiga dhinacyada badan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo dalalka iyo Hay’adaha uu la kulmay Safiiradooda. Ra’iisul Wasaaraha waxaa ku wehliyey kulanka Wasiirada Maaliyada, Qorsheynta, Difaaca, Amniga iyo Wasiiru Dowlaha Xafiiska RW.
200 ciidamo ka socda Turkiga oo Muqdisho yimid lana furi doono saldhigga milateri Sawirro
23/08/2017 12:09:00:- Waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray tiro ciidamo ah iyo saraakiil ka socda Turkiga, kuwaasi oo dhan 200 oo ka qeyb qaadanaaya howlgalka saldhiga milateriga ee Turkiga ka furtay Muqdisho.
Arday Itoobiyaan ah oo buugga mucjisooyinka ku galay arin lala yaabay Video
23/08/2017 15:56:00:-Kirubel Yilma, oo labaatan sano jir ah kana soo jeeda dalka Itoobiya, ayaa galay buugga lagu diiwaan geliyo mucjisooyinka iyo la yaabka dunida ee Guinness World Records kadib markii uu soo bandhigay arin lala yaabay.
Maamulada Galmudug iyo Ahlusunna oo hal maamul ku midoobaya Akhriso
23/08/2017 15:46:00:-Jenenaraal Maxamad Nuur Galaal oo horay ugu mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada milateriga Somalia ayaa shalay gaaray magaalada Cadaado, isagoona u tegay waan waanta maamulada Galmudug iyo Ahlusunna, wuxuuna shaaciyay qorshe cusub oo lagu mideynayo Galmudug iyo Ahlu suna.
12 jir xilkas ah oo darawal ka ah booyad waraab gaarsiisa miyi iyo magaalo Video
23/08/2017 12:13:00:-C/fitaax Maxamed Kaarshe oo da’diisu tahay 12 sano jir ayaa deegaanka Ufeyn oo ka tirsan gobolka Bari ka ah darawaal gaari weyn oo saaran booyad, isla markaana waraabka gaarsiiyo miyiga iyo baadiyaha.
SPORTS / ENGLISH
Ronald oo waxaan macquul aheyn ku tilmaamay ganaaxa ciyaareed ee la saaray
Uncovering Somalia`s forgotten music of the 1970s
Guddoomiyaha gobolka Missouri oo daqiiqadihii u dambeeyay dil ka bad-baadiyay eedeysane madow ah
23/08/2017 12:55:00:-Guddoomiyaha gobolka Missouri Eric Greitens ayaa baajiyay xukun dil ah oo nin madow ah lagu fulin lahaa kaas oo ku eedeysnaa in uu dilay gabar caddaan ah, wuxuuna magacaabay guddi baaritaan ku sameeya xukunkii lagu riday.
Booliska Jarmalka oo qabtay kiniiniyaal daroogo ah oo loo muuqaal ekeysiiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Sawirro
23/08/2017 06:05:00:-Booliska magaalada Osnabrück ee waqooyiga dalkaasi Jarmalka ayaa gacanta ku dhigay gaari ay wateen wiil iyo aabihiis kaas oo ay ku jireen dhowr gartoon oo kiniini daroogo ah oo loo muuqaal ekeysiiyay wajiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Booliska Florida oo soo bandhigay muuqaalka mid la mid ah askartooda oo shil fool xun galaya Video
23/08/2017 06:43:00:-Booliska gobolka Florida ee dalkaasi Mareykanka ayaa soo bandhigay muuqaal ay mudo haysteen kaas oo muujinya mid ka mid ah askartooda oo shil fool xun galaya isaga oo ku socda 167 kilo mitir, saacaddii.
Madaxweyne Farmaajo oo faray xukuummadda in ay dabagal ku samayso qorshayaashii ay isku soo afgarteen dowladda Masar
23/08/2017 06:20:00:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray Xukuummadda in ay dabagal ku samayso sidii looga mira dhalin lahaa qorshayaashii ay isku soo afgarteen dowladda Masar.
Donald Trump oo eed culus oo ku aadan dibadbaxyadii cunsuriyadda Charlottesville u jeediyay warbaahinta
23/08/2017 05:45:00:-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay khudbad ka jeediyay masrax ku yaal magaala Phoenix ee gobolkaasi Arizona ayaa waxaa uu eed culus oo ku aadan isku dhacyadii cunsuriyadda xambaarsanaa kuwaas oo dhowaan ka dhacay magaalada Charlottesville.
SAWIRRADII U DAMBEEYAY
SAWIRRO TAYO LEH:
Maxaad kala socotaa rafaadka iyo khasaaraha Mareykanka iyo xulufadiisa ku haysta dalka Afghanistan? Sawirro 23/08/2017 05:48:00:-Dagaalkii ugu dheeraa ee uu Mareykanku galo ayaa lagu sheegay kan uu dalka Afghanistan ka wado, waxaana uu socdaa mudo 16 sano ah. Mareykanka iyo xulufadiisa Nato ayaa waxaa dagaalkaasi kasoo gaaray khasaare aad u ballaaran.
Maxaad kala socotaa rafaadka iyo khasaaraha Mareykanka iyo xulufadiisa ku haysta dalka Afghanistan? Sawirro
22/08/2017 11:09:00:-Dagaalkii ugu dheeraa ee uu Mareykanku galo ayaa lagu sheegay kan uu dalka Afghanistan ka wado, waxaana uu socdaa mudo 16 sano ah. Mareykanka iyo xulufadiisa Nato ayaa waxaa dagaalkaasi kasoo gaaray khasaare aad u ballaaran.
Jagadii uu ka geeriyooday Cabbaas Siraaji ee wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo la magacaabay Akhriso
22/08/2017 17:55:00:-Digreeto kasoo baxday xafiiska ra’isal wasaaraha ayaa lagu magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka. R/wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u magacaabay xilkaan Engneer Saadiq C/laahi Cabdi maanta oo taariikhdu tahay 22-ka Bisha Agoosto 2017-ka.
23/08/2017 06:11:00:-Xidiga kubadda cagta ee kooxda Real Madrid, Cristiano Ronald oo ka hadlay go`aanka maxkmadda dalka Spain ee dhanka ciyaaraha ay kaga ganaaxday shanta ciyaarood ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan macquul aheyn.
USA: Xaakim maxkamadeed oo nin ku hor toogtay maxkamadda horteeda Sawirro
22/08/2017 11:31:00:-Xaakim Maraykan ah oo ku sugnaa gobolka Ohio ayaa toogasho ku dilay nin rasaas ku soo furay oo dhaawac xun ugu gaystay maxkamad bannaankeed.
Aqalka sare ee baarlamaanka oo si kulul ugu hadlay lacagaha xad-dhaafka laga qaado xujeyda Soomaalida Sawirro
22/08/2017 12:35:00:-Qeyla dhaanta iyo cabashada xujeyda Soomaaliyeed ay kasoo direen magaalada barakeysan ee Madiina ayaa dhalisay in mudanayaasha aqalka sare ay si kulul ugu doodaan lacagaha laga qaado xujeyda Soomaaliyeed oo ah mid qaali ah, iyagoona u yeeray afar wasiir oo arrintaan ay khuseyso.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil ku xukuntay labo dhallinyaro oo horay dil ugu geystay degmada Wadajir nabaddoon Sawirro
22/08/2017 09:10:00:-Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku ridday labo eedeysane oo loo heystay dilka oday dhaqameed ka soo jeeda deegaanada Koofur Galbeed oo lagu magacaabi jiray Suldaan Hilowle Xeefow Xuseen. Nabadoonka ayaa ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Federaalka kuwooda kasoo galay Koonfur Galbeed.
Madaxweyne Trump oo baddalay qorshihiisii Afghanistan, sheegayna in ay sii joogi doonaan
22/08/2017 05:25:00:-Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka oo khudbad toos uga baxeysay taleefishinnada ugana hadlayay qorshihiisa dalka Afghanistan ayaa sheegay in degdeg ku saaridda ciidanka dalkiisa ee ku sugan Afghanistan ay fursad siineyso ururada argagixisada ah.
Dowladda dalka Hindiya oo go`aan maxkamadeed ka gaari doonta ragga saddexda dalaaqo isu daba dhiga hal mar dumarka
22/08/2017 05:35:00:-Maxkamadda ugu saraysa dalka Hindiya ayaa la filayaa inay go'aan ka gaarto furitaanka degdeg ah ee saddexda dalqadood mar qura ay ku dhawaaqaan ragga Muslimka ah ee dalkaasi.
Booliska Spain oo goor dhow toogtay ninkii ay ku tuhmayeen weerarka Barcelona
21/08/2017 18:34:00:-Nin la rumeysan yahay in uu yahay kii waday gaarigii dadka la jiirsiiyay wadada La Rambla ee magaalada Barcelona Younes Abouyaaqoub ayay galabta toogteen booliska dalkaasi Spain.
M/WEYNE FARMAAJO: " - Imaamka Al-Azhar waxaan isla qaadannay sidii la iskaga kaashan lahaa iftiiminta fikirka khaldan ee xagjirnimada" Sawirro
21/08/2017 18:08:00:-Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalinkii labaad booqasho ku jooga dalka Masar ayaa maanta tagay Xarunta Al-Azhar Al-Shariif ee magaalada Qaahira, halkaas oo sii diirran uu ugu soo dhaweeyey Imaamka Mu’assasada Al-Azhar Dr. Axmed Al-Dayib.
Madaxweynaha Galmudug oo magacaabay golaha wasiirada cusub ee Galmudug Akhriso
21/08/2017 21:31:00:- Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub oo ka kooban 22 wasiir, kuxigeenadooda iyo 8 Wasiiru dowlayaal.
Madaxweynaha Jubbaland oo daah furaysharciga dhismaha dowladaha hoose Sawirro
21/08/2017 17:35:00:-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta si rasmi ah u daah furay Sharciga Dhismaha Dowladaha Hoose iyo geedi socodka dhismaha golayaasha Degmooyinka.
RUUSHKA: Muuqaalka ninkii mindida ku weeraray shacabka oo ay boolisku tooganayaan Video
21/08/2017 15:38:00:-Muuqaal muujinaya ninkii mindida ku dhaawacay siddeedda ruux magaalada Surgut ee gobolkaasi Siberia ee dalka Ruushka ayaa lasoo bandhigay. Niinkan iyo booliska oo is ceyrsanaya ayaa muuqaalka lagu arkayaa, dabadeedna dhabarla laga tooganayo.
Ciidamo ka socda dalka Burundi oo kasoo degay garoonka diyaaraddaha Muqdisho Sawirro
21/08/2017 14:42:00:-Ciidamo hor leh oo ka socda dalka Burundi ayaa kasoo degay garoonka diyaaraddaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho axadii shalay. ciidamadaan cusub ayaa u bilaabatay hal sano oo ay ku gudanayaan waajibaadkooda nabad-ilaalineed ee Soomaaliya iyaga oo qayb ka ah ciidamada AMISOM.
Shirkad hoteelada iyo maqaayadaha ka uruurisa bisadaha oo Muqdisho ka howl bilowday Sawirro
21/08/2017 14:51:00:-Shirkad aan horay looga arag magaalada Muqdisho oo aruurisa bisadaha ama mukulaaha isla markaana dadka lacago ugu qaatado, si looga dhaqaajiyo.
RUUSHKA: Muuqaalka ninkii mindida ku weeraray shacabka ay boolisku tooganayaan Video
Asnaamtii dhalisay cunsuriyadda maalmahan ka taagan dalka Mareykanka oo dhulka la dhigay iyo shacab ku dur-duriyay Sawirro
Xildhibaanad Australian ah oo iyadoo jalbaab wadata soo dhex gashay baarlamaanka Video
Kummannaan dad ah oo mudaaharaad kala hor tagay kooxo cunsuriyiin ah magaalada Boston, maxaase kala qabsaday? Sawirro
Nin muruqiisa lugta "sheydaamo" ka dhex shaqeysanayaan iyo isaga oo xannuun hayo oo duubay Video
Orgi boqor ahaan loogu caleemo-saaray dalka Ireland kaddib markii uu geeriyooday kii ka horreeyay Sawirro
Muuqaal muujinaya booliska Spain oo tooganaya mid ka mid ah raggii weerarka ka geystay magaalada Barcelona Video
Booliska El Salvador oo xoog xabsiga ugu taxaabay xubno ka tirsan gangs-ka laga baqo ee MS-13 Sawirro
Haweeney dib u heshay faraanti 13 sano ka hor ka lumay, kana dhex baxay karooto Video
Dowladda Sacuudiga oo dhulka dhigtay magaalo waddankeeda ku taal oo dad shiico ahi daggan yihiin Sawirro
Wiil iyo aabihiis oo hub la`aan meel saaray burcad hubeysan oo dhaceysay dukaan ay lahaayeen Video
POLAND: Afar ruux oo nasiib badan oo si dirqi uga bad-baaday dhimasho iyo tareen si xun u sigay gaari ay saarnaayeen Video
Mareykanka oo soo bandhigay bambooyinkii atomka ahaa ee uu la dhacay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki Sawirro
Booliska New Mexico oo meel keyn ah ka dhex helay nin gacmaha geed looga musmaaray Video
Dhimashadii ugu horreysay ee ka dhalata doorashada Kenya oo dhacday - dibadbaxayaal iyo booliska oo foodda is daray Sawirro
RUUSHKA: Madaxweyne Putin oo soo bandhigay sawirro dhiigga ku karinaya "cadowgiisa" Sawirro
HARGEYSA: Buuq ka taagan cidda loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka S/land Video
Dalxiisayaasha reer Yurub oo isku dilo sariiraha lagu cad-ceedsado ee hoteelada Gran Canaria Video
Duuliso Asli Cabaade oo lasoo xusuusiyay waayo-waayo iyo diyaarad ay ku sigatay in ay duuliso Sawirro
Carruurta dalka Ukrain oo lagu beero ruush naceyb iyo tababar ciidan oo la siiyo Sawirro
Qaabkii ciyaaryahan Neymar loogu soo dhoweeyay kooxdiisa cusub ee Paris St. Germain Sawirro
-©2006-2017 Calanka.com waa qeyb ka mid ah CALANKA MEDIA
Kor ku laabo ::: Login :::: Nagu xayeysiiso ganacsigaaga :::: Nala soo xiriir :::: Annaga / About